Nkeji Ikpeazụ: Oge Amachibidoro Daysbọchị 4 na Usoro Ọhụụ Ego | RayHaber | raillynews
HomeGeneralOGBU NIILEcoronavirusNkeji Ikpeazu: Mmachibido iwu eji abanyela Daysbọchị 4 na Nlele Ọhụụ abịa
Onye isi ala Recep Tayyip Erdoğan kwuru nkwupụta dị mkpa mgbe ndị isi ala ahụ gasịrị. "A ga-etinyere oge ịghachị na Mee 16-17-18-19," ka Erdogan kwuru na nkwupụta. Na nzukọ ahụ, ebe Erdogan kwupụtara mkpebi izu ya na adreesị ya na Nation, a ga-etinye ya ụbọchị nkwụsị ụbọchị anọ na Mee 19-16-17-18, nke gụnyere Ememe Ncheta nke 19th nke Atatürk, Ndị Ntorobịa na Egwuregwu. Ihe Onye isi ala kwuru bụ:
N’oge a na-egbochi ndị na-alọta, anyị nyeere ndị bi n’obodo ahụ aka ije anụmanụ ha na-azụ ma na-enye ụmụ anụmanụ okporo ámá nri. Nchọpụta ikpe mbụ na mba anyị, mba m hụrụ n'anya, bụ ọnwa 10 kemgbe 2 Machị. Ọ na-aga n'ihu ọgụ ọgụ nde 83 megide ọrịa a zuru ụwa ọnụ. Ndị ọrịa anyị na-agbake ma nwekwa ọgwụgwọ na-agbake. Ọmarịcha foto dị n'ihu na-eduga anyị ịme ihe na usoro nke ịhazi ndụ ndụ site na ibelata ụfọdụ mgbochi na usoro ahụ ike. Anyị abanyela oge ọhụrụ. O doro anya na ụwa ga - ewe ogologo oge iji merie ntiwapụ nke ọrịa corona.
Citizensmụ amaala anyị ekwesịghị ịghọta usoro nke ibi ndụ dị ka ihe na-alọghachi tupu March 10 dị. Enwere ọmụmaatụ nke ntakịrị nleghara anya nwere ike ibute oke nke ntiwapụ ahụ. Ndị na-apụ na-enweghị ezigbo ọrụ dị mkpa, ndị nọ n'ime ụlọ na n'èzí n'okporo ụzọ, jiri aka ha na-azụ nje ahụ. Anyị na-aga n'ihu na mgba anyị n'otu ụzọ ahụ anyị nabatara ma hazie eziokwu a. Achọrọ m ka aga-atụle usoro nke usoro anyị ka agbadoro ya na usoro nke iwu ndị a. Anyị anaghị alaghachi oge ochie, anyị na-anwa ime ka ndụ anyị ka ọ dị mfe n’oge ọrịa. Anyị na-enyocha ọrụ anyị na-aga n’ihu ma mezue mmejọ anyị.
Ọnụ ego nke SSK na Bağ-kur, nke anyị nyefere oge ọnwa isii, ruru ijeri ijeri iri anọ. Mgbe oria ojoo a gachara, anyi choro ime ka obodo anyi baa uru n 'usoro ochichi na onodu aku na uba. Anyị ga-emekwu ka ọta nchekwa na-elekọta mmadụ sie ike. Anyị kpebisiri ike iwusi mba na obodo anyị ike, ịzụlite na ike.
Ntinye nke ụlọ ọrụ ahụike yana yana ụlọ ọrụ ahụike ọha na-enye ọrụ dị elu bụ mba anyị. Anyị nyochara owuwu nke ụlọ ọgwụ Yeşilköy na Sancaktepe na ụlọ ọgwụ Hadımköy. Na Mee 21, anyị na Prime Minista Japan nke Mr. Mr. Abe ga-emeghe ụlọ ọgwụ. Ọ ga-amasị m ikele ndị ọrụ anyị maka mbọ ha na-agba n'ihi izu izu nchekwa ọha nke Mee 11-17. N'oge ọrịa ọrịa, anyị kpuchitere ọgwụ 43 ọzọ. Ekwere m na anyị ga-eme ka mmepụta na ọrụ anyị ka mma site na n’iru n’ihu na-aga n’ihu anyị na-alụso ọrịa ọgụ na ntiwapụ nke ọrịa.
Anyị nyere ụmụ amaala anyị karịa afọ 11 ohere ịpụ n'okporo ụzọ dị n’agbata elekere iri na otu na iri na ise ụnyaahụ. Obi dị anyị ụtọ ịhụ ka ụmụ amaala a na-agbaso iwu. Na Fraịde, otu afọ 15-65 ga-erite otu ohere ahụ. Belụsọ na enwereghị nsogbu ọ bụla, a ga-etinye ya n'ọrụ n’izu ndị na-abịanụ. Na 15-20-16-17 May, a ga-etinye usoro mgbochi n'oge ọzọ.
Gịnị bụ ntaramahụhụ ọ ga-alọta? Ya mere, Olee Mgbe fe ga-akwụsị?
Onye isi ala Erdoğan: Oge Curbọchị Iwu isii
Ineszọ okporo ụzọ adịgharịrị na Curfew na Denizli
Nsacha igwe zuru oke na mmachi IMM
Nkwupụta Berber, Shoppinglọ Ahịa andzụ ahịa na Nchịkwa Iwu Oge Ọsọ site na Mịnịsta nke ime obodo
Nkwupụta na Oge Esemokwu si na Governorship Istanbul
Daysbọchị ole ka ọ bụ n’usoro Eid? N’ime Nkwa Ndị A? Ahịa na Ovens na-emeghe…
Oge 29 Metro nke Kadikoy-Kartal ma ọ bụ minit 32?
Nri bụ ihe ndị a zụrụ nke ọma n'oge mgbochi nke abụọ
Nkọwa nke Oge Daybọchị 4 ga-ekpebi!